Shangri-ला प्राचीन तिब्बत को एक mythical कथामा आधारित पाँच रील स्लट पन्ध्र निश्चित paylines संग खेल हो. What makes this best slots jackpot game is mind blowing graphics along with an impressive jackpot reward. खेल बिल्कुल जादुई देखिन्छ कि मन्दिर र पहाड दृश्य संग एक नदी धाराको पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. पृष्ठभूमिमा संगीत धेरै सूथिंग छ र तपाईं शान्त कायम र मन केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ. खेल मा वातावरण प्रेरक दृश्यहरू संग कल्पना को एक पूर्ण बिभिन्न संसारमा तपाईं लिन्छ. आफ्नो बाजी राख्न, तपाईं 20p रूपमा कम छनौट र प्रति स्पिन £ 90 को गेम अधिकतम सम्म जान सक्नुहुन्छ.
यो जादुई सर्वश्रेष्ठ स्लट Jackpot खेल NextGen विकास भएको थियो (NYX), अनुभव दुई दशकमा एक लोकप्रिय क्यासिनो विकास ब्रान्ड. तिनीहरूले क्यासिनो खेल विभिन्न वर्ग संसारमा तिनीहरूलाई शीर्ष दस कम्पनीहरु को एक बनाएको छ कि सयौं सिर्जना गरेका.
यो सबै भन्दा राम्रो स्लट Jackpot खेल मध्ये एक छ यसलाई उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स र ध्वनि आउँदा. त्यहाँ सेतो बाघ केही अद्भुत प्रतीक हो, हात्ती, rhinos, मन्दिर, चक्कु र लोटस फूल. शीर्ष तिर्ने प्रतीक को एक विजेता नम्बर roars कि शक्तिशाली सेतो बाघ भन्दा अन्य कुनै पनि छ 500 पटक खम्बा. तपाईं बलियो payline मार्फत पाँच प्रतीक गर्न आवश्यक छ कि प्राप्त गर्न, जो रील मा केन्द्र पङ्क्ति छ. कम तिर्ने प्रतीक खेल कार्ड हीरा हो, कुदाल, बलिउड जस्तो कि हृदय र क्लब. यो खेल मा सात बोनस प्रतीक हुन् र तिनीहरूले केटी को तीन अलग अलग प्रतीक र चार गोलो आकारको artefacts छन्.
जंगली विशेषताहरु: एक फ्रेम मा एक सुन्दर केटी को तस्वीर जंगली प्रतीक हो र यो सबै आधार प्रतीक लागि कवर. यसबाहेक, आगो रोशनी फ्रेम अर्को चित्र अंधाधुंध जंगली थप विजेता संयोजन प्रस्ताव रूपमा देखिन्छ. जहाँ केटी को सम्पूर्ण आंकडा राम्रो WINS प्रस्ताव देखिन्छ स्ट्याक जंगली एक संभावना पनि छ.
स्क्याटर विशेषता: प्रार्थना पाङ्ग्रा यो सबै भन्दा राम्रो स्लट Jackpot खेल र तीन वा बढी को स्क्याटर सुविधा बोनस सुविधाहरू ट्रिगर छ. एक payline मार्फत यो प्रतीक पाँच पनि Jackpot बोनस तपाईं कहाँ प्राप्त ट्रिगर 3000 सिक्का जीत. यदि तपाईं उच्च-मूल्य बाजी संग खेलिरहेका छन् यो ठूलो प्राप्त गर्न सक्छन्.
catchy ग्राफिक्स र रंगीन प्रतीक संग, यो सबै भन्दा राम्रो स्लट Jackpot खेल बोनस सुविधाहरू तपाईंबाट जित्न सक्छौं को एक किसिम प्रदान गर्दछ. यो साँच्चै तपाईं केही गम्भीर monies बनाउने हो भने प्रयास गर्न सबै भन्दा राम्रो खेल हो.
जंगल आत्मा: जंगली को कल